Flexible & Yakagadzwa Pamhepo Degree Zvirongwa »Hodges University
Categories: Nhungamiro yepamhepo
Isu Tiri Panharaunda Inotungamira yeDzidzo yepamhepo!
KuYunivhesiti yeHodges, tinoziva kuti kudzidza munyika yanhasi yebasa rakabatikana uye zvirongwa zvemhuri zvinogona kuita kuti zviite sezvakaoma kudzokera kuchikoro. Ndosaka takagadzirisazve akawanda edu macampus mapurogiramu kuitira kuti vatorwe online. Kugadzikana panguva yekuzadzisa degree rako ndiyo nzira yakanakisa yekuti iwe ugone kubudirira, uye isu tinozviziva. Vamwe vanhu vakuru vevadzidzi vafamba nenzira imwechete yauri kufunga uye vawana kubudirira kwavo neHodges 'epamhepo degree zvirongwa.
Pamusoro Pamhepo Zvirongwa
Kubatsira kwekuenda kuHodges U Kune Yako Yepamhepo Degree kana Certification
Nekuti isu takagadzira yedu degree nzira dzevadzidzi vepamhepo, iwe unowana zvakanakira izvo zviri kumusoro kune mamwe epamayunivhesiti epamhepo.
Mapurofesa aripo kuti vapindure mibvunzo yako. Isu tiri yakazara-sevhisi yunivhesiti inopa zvese zvechinyakare uye zvepamhepo zvirongwa. Yedu fakitori inoita kuti iwanikwe kwauri kuti upindure mibvunzo yako uye ikubatsire iwe kubudirira. Uyezve, fakaroti yedu inodarika iyo yakaoma maitiro ekudzidzisa anodikanwa kumatunhu uye epurogiramu kubvumidzwa.
Yedu madhigirii zvirongwa zvakagadzirwa zvizere kune vakuru vanhu vadzidzi. Kuchinja-chinja muchirongwa chega chega ndizvo zvinoita kuti tisiyane. Isu hatisi yunivhesiti chete inopa online kosi. Isu yunivhesiti yakazvipira kubudirira kwako.
Iwe hausi kuzove unokanganisa mhando kuti zvive nyore. Isu tiri yunivhesiti inobvumidzwa padunhu repamhepo. Kubvumidzwa kwedunhu kwakanyanya kuomarara uye kunoda mhedzisiro yevadzidzi inopfuura mvumo yenyika. NaHodges U, iwe unowana dzidzo iri nani.
Mapurofesa edu ane ruzivo rwechokwadi-rwenyika. Ivo vanogona kukupa iwe hunyanzvi hwaunogona kushandisa kune rako razvino basa. Tanga kushandisa hunyanzvi hwaunodzidza nhasi.
Canvas ipuratifomu yepamhepo yatinoshandisa pakuburitsa kosi yepamhepo, ichiita kudyidzana kwevezera uye rutsigiro rwekuraira zvirinyore Kutumira mameseji chiriporipo, chaiwo mahofisi emahofisi evarairidzi, hurukuro dzakarekodwa, uye kugona kwemisangano chaiyo-nguva zvese zviripo muHodges University online kudzidza ruzivo.
Ita shanduko ramangwana rako wega richakutenda iwe. Tanga online nhasi!
Degree uye Certification Dhizaini Mafomati
KuHodges University, mazhinji emadhigiri edu ekoreji anowanikwa zvachose online. Takanyora runyorwa rweatenzi, bachelor's, shamwari, uye zvitupa zvirongwa zvinogona kutorwa online, kubva chero kupi munzvimbo makumi mana neshanu dzatinoshandira.
O = Makosi ese ari muChirongwa cheDhigirii anogona Kupedzwa Zvakazara Pamhepo
B = Makosi muDhipatimendi Chirongwa ari Akasanganiswa / Akasanganiswa Dzimwe Kosi dzinogona Kupedzwa Zvakazara Pamhepo uye Dzimwe Kosi Dzinofanira Kuve Dzakapedzwa On-Campus.
C = Makosi ese ari muChirongwa cheDhigirii anofanira kunge Akazadza On-Campus.
CHIKAMU CHEZVO O B C
AA - General Zvidzidzo Ehe Ehe Aihwa
AA - Criminal Justice Tarisa Ehe Aihwa Aihwa
AA - Dhizaini Dhizaini uye Graphics Tarisa Ehe Ehe Aihwa
AA - Hutano Sayenzi Tarisa Aihwa Ehe Aihwa
AS - Accounting Ehe Ehe Aihwa
AS - Bhizinesi Rekutungamira Ehe Ehe Aihwa
AS - Computer Ruzivo Technology Ehe Ehe Aihwa
AS - Emergency Medical Services Aihwa Ehe Ehe
AS - Hutano Hutano Kutungamira Ehe Aihwa Aihwa
AS - Nyanzvi yeKutaurirana Ehe Ehe Aihwa
AS - Paralegal Zvidzidzo Ehe Aihwa Aihwa
AS - Panyama Therapy Mubatsiri Aihwa Aihwa Ehe
BS - Kuverenga Ehe Ehe Aihwa
BS - Yakashandiswa Psychology Ehe Aihwa Aihwa
BS - Bhizinesi Rekutonga Ehe Ehe Aihwa
BS - Computer Ruzivo Technology Ehe Ehe Aihwa
BS - Kururamisira Kwemhosva Ehe Aihwa Aihwa
BS - Mari Ehe Ehe Aihwa
BS - Hutano Sayenzi Aihwa Ehe Aihwa
BS - Hutano Svs. Admin Ehe Aihwa Aihwa
BS - Interdisciplinary Zvidzidzo Ehe Aihwa Aihwa
BS - Zvemutemo Zvidzidzo Ehe Aihwa Aihwa
BS - manejimendi Ehe Ehe Aihwa
BS - Kushambadzira Kwazvino uye Branding Ehe Ehe Aihwa
BS - Kuchengetedzeka / Networking Ehe Ehe Aihwa
BS - Nursing Aihwa Aihwa Ehe
BS - Software Kuvandudza Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - AutoCAD Kugadzira Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Dhizaini Dhizaini Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Dhatabhesi Management Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - E-Bhizinesi Software Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - E-Bhizinesi Ventures Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - EDiscovery / Litigation Ehe Aihwa Aihwa
ESL - Chirungu semutauro wechipiri Ehe Ehe Ehe
Chitupa - Kuchengeteka Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Kusiyana, Kuenzana Kunosanganisira Hutungamiri Ehe Aihwa Aihwa
Chitupa - Forensic Accounting / Kubiridzira Kuongorora Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Graphic Dhizaini Kugadzira Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Rubatsiro Desk Rutsigiro Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Ruzivo Ruzivo Rutsigiro Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Network Nyanzvi Ehe Ehe Aihwa
Chitupa - Chirwere Kushungurudzwa Kuzivisa Chirongwa Chirongwa Ehe Aihwa Aihwa
Chitupa - Chiitiko cheMushandisi / Webhu Dhizaini Ehe Ehe Aihwa
JM - Juris Mudzidzisi Ehe Aihwa Aihwa
Master - Kuverenga mabhuku Ehe Aihwa Aihwa
Master - Bhizinesi Rekutungamira Ehe Ehe Aihwa
MS - Inoshandiswa Yakanaka Psychology Ehe Aihwa Aihwa
MS - Clinical Mental Health Counselling Ehe Ehe* Aihwa
MS - manejimendi Ehe Ehe Aihwa
Ndokumbira utarise nemupi wezano rako rekubvuma kuti uwane ruzivo rwepamberi.
* Minimum yeVadzidzi gumi nevaviri.
Wakagadzirira Kudzidza Pamhepo?
Kudzidza pamhepo kunoda mafungiro akanaka uye kutsunga kuona basa kusvika pakupedzisa. Tinotenda mauri, uye tinoziva kuti une izvo zvinotora kuti udzidze pamhepo. Asi nezvakawanda zvinodiwa panguva yako, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti iwe unonzwisisa zvizere izvo zvinobatanidzwa muchirongwa chepamhepo. Kudzidza pamhepo hakusi nyore, asi zvinogona kuve sarudzo yepamusoro iyo inokutendera iwe kupedzisa yako epamusoro kudzidza zvinangwa zvedzidzo.
Nzwisisa zvazvinoreva kuva online online. Kuchinja-chinja ndiyo kiyi yekudzidza pamhepo. Unogona kudzidza kutenderedza ebasa rako uye nezvirongwa zvemhuri, munguva yauinayo panguva yekuzorora kwemasikati uye usati kana mushure mekushanda. Zvichida kwauri, mangwanani-ngwanani kana mushure mekunge vamwe vese vaenda kunorara. Chero chipi chirongwa chako, zvinokwanisika kutora epamhepo makirasi. Synchronous, asynchronous, tekinoroji-inowedzerwa, simulcast, uye mhenyu hurukuro pamhepo makosi anogona kunge achiwanika mukati mepasi redzidzo yepamusoro. Panogona kuve nemamwe matambudziko, futi. Kudzidzira pamhepo kunotora nguva yakawanda kupfuura kudzidza kwechinyakare (semuenzaniso: kirasi imwe chete yeawa ine hurukuro uye nhaurirano inogona kushanduka kuita yakawanda nguva online mushure mekunge waverenga hurukuro uye nyora nhaurwa dzako dzehurukuro yekudzokorora kwemudzidzisi). Kana iwe uchiwanzoda yakati rebei kutungamirwa kubva kuna muzvinafundo, kudzidza pamhepo kungave kwakaomarara kupfuura nzvimbo yakasanganiswa yekudzidza Isu tinopa nzira dzakawanda dzekudzidza; sarudza iyo inokwana iwe.
Hunhu hunoita kuti vadzidzi vepamhepo vabudirire inosanganisira kugona kwakanakisa kwekutaurirana, kugona kuverenga uye kunzwisisa chidzidzo nekukurumidza uye zvine hungwaru, hunyanzvi hwemasvomhu akasimba, kugona (uye chishuwo) chekushanda wakazvimirira usingatariswe, uye kuzviziva zvakakwana kuti uone nzira yako yeramangwana uchitora danho tsungirira kuburikidza nedambudziko. Iwe unozoda kugona kuronga nguva yekudzidza uye kuteedzera yako yakasarudzika chirongwa kunyangwe kana chimwe chinhu chikamuka chingakutsause iwe. Usatombo kendenga kana mamwe eaya hunyanzvi achiita seanorema. Vashandi vedu varipano kuita kuti kudzidza kuve nyore kune wese munhu.
Kugona kwekubatana kwakanaka nevanhu vakafanana pavanenge vachidzidzira online. Zviri nyore kwazvo kubudirira kana iwe uine yakanaka rutsigiro system yekukubatsira iwe kuburikidza neyako online kudzidza chirongwa. Iwe uchasangana nematambudziko, uye yega yega ichave yakakosha kana iwe wakabata degree rako muruoko rwako. Kuve neakanaka mamodheru uye sisitimu yekutsigira iyo inogona kukupa iwe zvese zvaunoda kuti usvike kumagumo chinangwa chako chakabatana pakubudirira kwako. Une izvi!
Ziva kukurudzira kwako. Zvikonzero nei wafunga kuenda kuchikoro online zvinokanganisa kugona kwako kudzidza. Ziva uye unzwisise kurudziro yako yekusarudza kudzokera kuchikoro uye kudzidza online. Kune vazhinji, kudzidza pamhepo kunovatendera kuti varambe vachishanda ivo vachitevera dzidzo yepamusoro kuti vagowana mari yakawanda. Chengetedza kurudziro yako kumberi kuti iwe ugone kuzvirangarira kana kudzidza kuchiratidzika kunge kunonetesa kana kukuya. Iwe uchaisa zvese zviri zviviri mukati mako uye nezvako pachako muchirongwa chepamhepo. Nguva yako ndeimwe yemari hombe yauchazoita. Iko kuedza kwaunoisa mukudzidza kwako kwepamhepo kunowirirana zvakananga nemabatiro aunoita mumakosi ako. Iwe unogonazve kuita kuzvipira kwemari kwauri. Kuisa mari mudzidzo yako kunokupa iwe kudzoka kwakakura pakupedzisira. Isu tinoziva iwe unogona kuzviita, uye zvakadzika pasi, newewo uite!
Pamhepo Mudzidzi Admissions Details & Maitiro
Hodges Yunivhesiti haina rusarura pahwaro hwerudzi, ruvara, chinamato, murume kana murume, zvebonde, zera rakatangira, zera, kana hurema mukupa mikana yezvidzidzo kana mikana yebasa nezvakanakira. Nhengo dzese dzemunharaunda yeYunivhesiti dzinokosheswa zvakaenzana. Hodges Yunivhesiti haina rusarura pahwaro hwebonde kana hurema muzvirongwa zvedzidzo nemabasa ainoshanda, zvichiteerana nezvinodiwa zvese zvinoshanda federal uye nyika mitemo nemirau inosanganisira, asi isina kuganhurirwa, Chinyorwa IX cheDzidzo Amendments ya1972. , Chikamu 504 cheRehabilitation Act ya1973, uye maAmerican anehurema Mutemo wa1990. Mutemo uyu unowedzera kune ese mabasa nekugamuchirwa kuHodges University.
Mibvunzo ine chekuita neChinyorwa IX, inofanirwa kunangidzirwa kuMusoro weIX Coordinator:
Kelly Gallagher, Musoro IX Murongi 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966
Musoro IX Kudzidziswa kunogona kuwanikwa pano.
Mibvunzo ine chekuita neAmerican nehurema Mutemo inofanirwa kunanga kune ADA Coordinator:
Josh Carcopa, Mutungamiriri weZviitiko zveVadzidzi.
Mibvunzo yematsamba inofanira kutumirwa kuFort Myers Campus kukero inotevera: Hodges University, Attn: ADA Coordinator, 4501 Colonial Blvd, Fort Myers, FL 33966.
Yunivhesiti inochengetera kodzero yekuramba kubvumidzwa kune anenge achinyorera kana chiito chakadai chikaonekwa sechakanakira iye anenge achinyorera kana yunivhesiti. Yunivhesiti haigamuchire vanyoreri vane chisimba kana bonde zvinotendwa muzvirongwa zvaro zvekudzidza. Vamwe vanyoreri vane felony rekodhi vanogona kupedzisa Felony Conviction Appeal Fomu, iyo inoongororwa ne subcommittee yeYunivhesiti yeKomiti Yekuchengetedza. Subcommittee, ine danho rekupedzisira, ichaona kugona kwemumiriri kuenda kumberi munzira yekutambira.
Pamhepo Kudzidza matanho kuyunivhesiti anotariswa nehutungamiriri hwehunyanzvi hwechikoro chega chega chinotarisa kubatanidzwa kwemakosi epamhepo uye zvirongwa nehurongwa hwezvidzidzo. Makosi epamhepo uye zvirongwa zvinounzwa uchishandisa Canvas, iyo yunivhesiti yekufunda manejimendi sisitimu. Vadzidzi vanotora online makosi vanofanirwa kuti vazive neiyo Canvas chikuva vasati vatanga makosi avo.
Yese online kosi inodzidziswa kuHodges University inogona kuda proctored yekupedzisira bvunzo. Vadzidzi vanofanirwa kutora bvunzo dzekupedzisira (dzinoda webcam webhu) mukati memazuva akanyorwa mune MyHUgo portal. Yese online kosi ine inosanganisirwa proctoring mubhadharo (ndapota tarisa kuChikoro uye Mari purogiramu mune iyo Kunyoresa Mitemo uye Mamiriro).
Kudzidzira pamhepo / vadzidzi vekunze vadzidzi vanogona kutanga chichemo kuburikidza neemail ku onlinelearning@hodges.edu.
Muchiitiko icho vadzidzi vepamhepo / daro redzidzo vanonzwa kuti chichemo hachina kutarisirwa nemazvo nesangano, vadzidzi vanogona kuendesa chichemo kune vanotevera vezvematongerwo enyika:
a) Iye ombudsman anoshanda seye yenyika yekutanga poindi yekuonana yekugadzirisa mibvunzo uye kunetseka kubva kune vega zvikoro zvevakuru uye mahofisi echirongwa.
Akaringana Services Ombudsman
b) Kana Ombudsman ikatadza kukubatsira, bata Hofisi yeArticulation mukati meDhipatimendi redzidzo.
Vadzidzi vekudzidza pamhepo / kureba vadzidzi vakapedza chirongwa cheHodges University chekunyunyuta uye nzira yekunyunyuta yenyika inogona kukwidza zvichemo zvisiri zvekuraira kuFlorida State Authorization Reciprocity Agreement Postsecondary Reciprocal Distance Education Coordinating Council (FL-SARA PRDEC). Kuti uwane rumwe ruzivo nezve nzira yekunyunyuta, ndapota shanyira iyo FL-SARA Chichemo Maitiro peji.
Aya anotevera anoshanda marongero (8.1 Kodzero dzeVadzidzi uye Mabasa uye 8.4 Mutemo Wekunetseka Kwevadzidzi) inoburitswa muHodges University mudzidzi Handbook iyo inogona kuwanikwa pano.
Pamhepo Kudzidza Zvinodiwa
Wona Yedu Catalog Yezvakananga Nezve Online Kudzidza